बकिङघम प्यालेस हुँदै मार्क्स- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
ब्रिटिस राजमा अलिकता सहिष्णुता छ, ओली राजमा चौतर्फी असहिष्णुता छ । लाग्छ, ओली राजको क्रूर असहिष्णुता हिन्दु उन्मादी मोदी राजबाट प्रेरित छ । र, यो कमरेड सिजिन पिङको एकल स्वेच्छाचारतर्फ लम्किन उपद्रो जिद्दी गरिरहेछ ।
आश्विन २०, २०७५ खगेन्द्र संग्रौला
काठमाडौँ — बकिङघम प्यालेसले सम्झाउँछ सिंहदरबार, शीतलनिवास दरबार र बालुवाटार दरबार । यी जिनिसहरूमा बेलायतको संसदीय थिति र नेपालको संसदीय बेथिति जब देख्छु, मेरो मन त्यसैत्यसै उद्विग्न हुन्छ ।
समयले अगस्त ३ टेकेको छ । म विश्वको बूढो बाघ यूकेमा छु ।
अचम्म लाग्छ, मानिस जहाँसुकै जाओस्, कसरी उसलाई आफ्नै सम्झनाका अमिट छापहरूले नित्य पछयाइरहन्छन् † देहलाई आफ्नै छायाले निरन्तर पछयाएजस्तै । यसबाट कसैगरी छुट्कारा पाउन सकिँदैन । विस्मरणको व्यथाले यो आखेटबाट छुट्कारा त दिन्छ तर त्यसबखत जीवन आशा र निराशा, सुख र दु:ख, जय र पराजयको कथामाला बोकी हिँड्ने जीवन्त जीवन नै रहँदैन । रहन्छ त केवल स्मृतिशून्य हाडमासुको थुप्रो मात्र । त्यो जीवनमा न आफ्ना लागि कुनै उपयोगिता बाँकी रहन्छ न अरूका लागि । मलाई हाल विस्मरणबाट पीडित रसिक एवं विनोदी मित्र डीपी भण्डारीको याद आउँछ, र मन त्यसैत्यसै अमिलो हुन्छ ।
म एघार नम्बरी बाहनले औद्योगिक क्रान्ति र संसदीय शासन व्यवस्थाको जननी लन्डनका सडकहरू नाप्दै छु । साथमा राई त्रिमूर्ति अगुवा छन् । नरेश, मनकुमार र किरण राई । जब म लन्डनको सडक नियाल्छु, यसले मलाई आफ्नै काठमाडौँको सडक सम्झाउँछ । अनि लन्डन सहरले काठमाडौँ सहर । अनि बकिङघम प्यालेसले सम्झाउँछ सिंहदरबार, शीतल निवास दरबार र बालुवाटार दरबार । यी जिनिसहरूमा बेलायतको संसदीय थिति र नेपालको संसदीय बेथिति जब देख्छु, मेरो मन त्यसैत्यसै उद्विग्न हुन्छ ।
काठमाडौँका सडकका भद्रगोल दृश्यहरू मनको पर्दामा प्रकट हुन्छन् । सडकमा जता हेर्‍यो, बर्दीधारी ट्राफिक प्रहरीहरू देखिन्छन् । र, ठाउँठाउँमा देखिन्छन् बन्दुकधारी जवानहरू । टोपीधारी शासकका दरबारहरूमा त झन् राइफलधारी फौजीहरूका झुन्डै हुन्छन् । हेर्छु, लन्डनका सडकहरूमा न कतै ट्राफिक प्रहरी छ न छ कतै बन्दुकधारी जबान । तैपनि सडकमा ट्राफिक अनुशासन र मर्यादा शानदार छ † यो यस्तो किन छ ब्रो ? के को प्रेरणाले ? के–के प्रभावले ? केको निर्देशले ? वा केको डरले ? भाइ गाइडहरू भन्छन्— दाइ, यो जासुसी यन्त्रको कमाल हो । सडक किनारमा ठाउँठाउँमा जासुसी क्यामेरा जडान गरिएका छन् । ती अहोरात्र जाग्राम बस्छन्, र तिनले आँखाले भ्याएसम्म देखिने सडकको मिहिन जासुसी गर्छन् । छिसिक्क ट्राफिक नियम तोडयो कि तोडाहा ब्रो फसिहाल्यो । फस्ने हुस्सुलाई थाहापत्तो छैन, फसाउने चतुरेले उता पुर्जी काटिसक्यो । भोलिपल्ट जरिमानाको पुर्जी टयाक्क घरैमा हाजिर हुन्छ । बेलैमा तिरे केही राहत मिल्छ, विलम्ब गरे सरकारले जरिमानाको पनि जरिमाना असुल्छ ।
हुन त लन्डनका सडकमा भन्नु मात्र ट्राफिक प्रहरी छैन । वास्तवमा त्यहाँ प्रहरी नै प्रहरीको नित्य लावालस्कर छ । कुरो गजप छ † त्यहाँ प्रत्येक नागरिक सादा पोसाकधारी ट्राफिक प्रहरी हो । एउटाले नियम तोडेको देख्यो कि अर्काले जिब्रो निकालेर यसोक्क गिज्याइहाल्छ । जहाँका नागरिकमा लाज पचेको छैन, त्यहाँ गिज्याइले अचुक काम गर्छ । नियम तोड्नेलाई लाज लाग्छ । भित्रभित्रै ऊ पछुताउँछ । र, ऊ कान समातेर संकल्प गर्छ— हैट्, आइन्दा म... । त्यसउप्रान्त ऊ नियमको इज्जत गर्छ । अनि ऊ आफूलाई मर्यादाको वशमा राख्छ । यो नागरिक चेतना केवल एक दिन कानुनको डन्डा हल्लाएर बन्दैन । धेरै दिनको कानुनी डन्डा र नागिकको सचेत अभ्यासबाट बन्ने संस्कार हो यो । यो वास्तवमा दण्ड र पुरस्कार एवं निन्दा र प्रशंसाबाट निसृत भावनाको उपज हो । र, यो आफूलाई हर्दम अरूका आँखाले हेर्ने शिष्टताको द्योतक पनि हो ।
म सडक नाप्दै बेलायती बडामहारानीको बकिङघम दरबार हेर्न गएँ । जे अपेक्षित थियो, त्यहाँ मैले त्यो देखिनँ । जे देखेँ, त्यसबाट म हुनुसम्म चकित भएँ । दरबार, त्यो पनि जस्ताजस्ताको होइन, बेलायती महारानीको † तर अचम्म छ, दरबारवरिपरि बर्दीधारी र बन्दुकधारीको नाकमुख कतै देख्नु छैन । अहँ, फिटिक्कै, एउटै । त्यहाँ कुनै शासकीय ठाँटबाँट छैन । न त त्यहाँ हैकमी दम्भ प्रदर्शन नै छ । यता हाम्रातिरको शीतल निवास दरबार उता लन्डनमा मेरासामु फुत्त हाजिर भयो । अनि पछि लागेर आयो सिंहदरबार । अनि बालुवाटार दरबार । हेर्छु, यी सबै दरबारमा बर्दीधारी र बन्दुकधारीहरूका झुप्पा छन् । नागरिकका लागि सेरोफेरोको वातावरण बन्देजकारी छ, भयकारी छ । त्यहाँ धक्कुबाज शासकहरूका धकलाग्दा बर्दी र बन्दुकहरूका अदृश्य पर्खालहरू खडा गरिएका छन् । जननिर्वाचित भनाउँदो र जनप्रतिनिधि नामधारी ठालु यो पर्खालभित्र बस्छ । आम मानिस पर्खालबाहिर । भुइँफुट्टा हिरोद्वारा आफूलाई सामान्यजनभन्दा बेग्लो र विशिष्ट एवं उच्च र वरिष्ठ देखाउन बनाइएको मैमत्त अहंकारको पर्खाल हो यो । यो पर्खालभित्र र बाहिरको मनोवैज्ञानिक दूरी कति कति लामो छ † जो भित्र छ, ऊ आफूलाई राजा वा रानी ठान्छ । र, बाहिरकाहरूलाई ऊ तिरष्कार गर्छ, अपमान गर्छ, हेप्छ, ठग्छ र हर्दम सताउँछ । तथापि ढोँगी अभिनय गर्दै ऊ भन्न छाड्दैन— म प्रजातन्त्रवादी । म जनवादी । म कम्निस्ट । म समाजवादउन्मुख ।
बकिङघम प्यालेसबाहिर शिवरात्रि मेलामा झैँ रमितेहरू कमिलाको गोलोसरी स्याउँस्याउँती छन् । आउने आउँदा छन्, जाने जाँदा छन्, बात मार्ने मार्दा छन्, छिल्लिने छिल्लिँदा छन्, फोटा खिच्ने खिच्दा छन् । त्यहाँ कहीँ कतै कुनै रोकटोक छैन, छेकथुन छैन । रमितेजनमा त्यहाँ एकरत्ती संकोच छैन, भय छैन । कम्निस्टको पाङदुरे पगरी गुथेका हाम्रा शासकहरू भन्छन्— हाम्रो शासनको बान्की बेलायतको जस्तो झर्रो संसदीय किमार्थ होइन । यो त्योभन्दा उन्नत हो । यो त्योभन्दा फराकिलो हो । र, यो त्योभन्दा कता हो कता जनमुखी हो । यी पिपलपाते ब्रोहरू भन्छन् यसो र गर्छन् उसो । यी गर्छन् आखिर के ? राणशाहीतुल्य हैकमी दम्भ प्रदर्शन गर्दै यी आफ्ना दरबारदेखि कोसौँ परका ससाना खाली डबलीहरूमा निषेधाज्ञा थोपर्छन् । यी ठालुहरू मानौँ सचेत नागरिकले आफ्नो दुष्ट मति र भ्रष्ट आचरण देख्लान् र आफ्नो नाकतिर चुनौतीकारी औँला ठडयाउलान् भनी भयाक्रान्त छन् । र नै त यी निरङ्कुश जीवातहरू नागरिकहरूका आँखा, कान र मुख थुन्न आतुर छन् ।
प्यालेसबाहिर मण्डपमाथि एक भव्य प्रतीक छ । स्वतन्त्रता र ममताको प्रतीक । जसको गजुरमा पँखेटा फिँजाएर मुक्त आकाशमा उड्न लागेको चरो छ, र तल सबैतिर छन् कलिला लालाबोला बोकेका ममतामयी आमाहरू । मेरालागि त्यहाँको सुन्दरतम् र अविस्मरणीय दृश्य त्यही हो, त्यही स्वतन्त्रता र ममताको मनोरम प्रतीक !
अँ, प्यालेसबाहिर शासकीय दम्भ र शान झल्किने एउटै मात्र चीज दृष्टिगोचर भयो । त्यो हो, क्रुद्ध प्रतीत हुने घोडा र त्यसमाथि सवार पुरुषको अह्ररो अनुहार । चिटिक्क सिँगारिएको घोडा प्यालेसको मूलद्वारको समीपमा कम्पाउन्ड वालको आर्कमुनि मुन्टो बाहिर निकालेर लिन्ठिङ्ङ उभिएको छ । र, त्यसमाथि काठीमा एक जवान बसेको छ । खाइहालुँलाजस्तो मुद्रामा छ त्यो । कुन्नि, बाहिर सारा रमिते आनन्दी मुद्रामा फुक्काफाल हिँडिरहेका देख्दा त्यो अश्वारोहीलाई आफू महारानीको मूर्तिवत् कैदी भएको कष्टकर अनुभूति पो हुँदो हो कि † त्यसैले पो ऊ त्यस्तो रौद्र रूप धारण गर्न विवश भएको हो कि !
बेलायती प्यालेसको वातावरण आँखाभरि नजर गरियो । र, अगुवा जानिफकारहरूले मलाई नजिकैको नम्बर टेन डाउनिङ स्ट्रिटतिर डोर्‍याए । यो नम्बर टेन रहेछ बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालको नाम । नाम पनि क्या गजबको दस नम्बरी † दस नम्बरीपछि मलाई राईत्रयले वेस्ट मिनिस्टर प्यालेसतिर कुदाए । त्यो रहेछ बेलायती संसद्भवन । प्रधानमन्त्रीय भवन र संसद्भवन छेउछाउको वातावरण नियाल्न खोज्दा मलाई झ्याट्ट शीतल निवास दरबार, सिंहदरबार, बालुवाटार दरबार र संसद्भवन, बानेश्वरको याद आयो । उता चाल उही बकिङघम प्यालेसको छ । त्यहाँ पनि दर्शनार्थीहरू स्याउँस्याउँती छन् । त्यहाँ पनि न कतै बर्दीधारी बन्छ न कतै बन्दुकधारी छ । वातावरण उस्तै भयमुक्त छ । अनि हाम्रो शीतलनिवास दरबार, सिंहदरबार, बालुवाटार दरबार र बानेश्वर भवनमा नि ? यी दरबारवरिपरि काँडेतारका बार छन् । बारबाहिर प्रहरी र फौजीका झुन्ड भयकारी छन् । ती कसैका हातमा लाठा छन्, कसैका हातमा बन्दुक । आखिर कसको डरले ? कसका टाउकामा ठोक्न ? कसका छाती दाग्न ?
छाँटले बेलायतको संसदीय शासन निकै उदार र सहिष्णु लाग्छ । देखियो त । अनि यताको गोर्खे संसदीय शासन ? यथार्थमा यो त संसदीय शासन नै होइन । संसदीय शासनका नाममा केवल एक कलंक हो यो । शासनतन्त्रमा नाम र छाप छ कम्निस्टको । कम्निस्ट अर्थात् जनताको गुनिलो मित्र र विनम्र सेवक । सादा जीवन उच्च विचारको निष्ठावान् उपासक र इमानी अभ्यासकर्ता । तर, ओली सर र दाहाल ब्रोको कुशासनको सारमा प्रदर्शित मति, चरित्र र आचरणमा यति साह्रो के गनाएको हो यो ? सढेको सामन्तवाद ?
लन्डनका सडकमा शासकको सवारीमा के हुन्छ ? नेपालमा जे हुन्छ, त्यहाँ त्यो हुँदैन । त्यहाँ सवारीमा एक जना ठालु–ठालुनीको दम्भी ठाँटबाँट र सकल जनतालाई अथाह सास्ती हुँदैन । साइरनले सवारीको सूचना जब दिन्छ, वाहनहरूले सर्लक्क बाटो छाडिदिन्छन् । र, मिनेटभरमै सवारी आँखाबाट ओझेल परिसक्छ । अनि हाम्रोमा ? हाम्रोमा राष्ट्रपति विद्याको सवारी हुँदा लोकलाई उही निरंकुश राजतन्त्रको पिराहा प्रेतले सताउँछ । र यसको नाम छ— समुन्नत र परिमार्जित संसदीय व्यवस्था † कुरूप वस्तुका लागि सुन्दर अर्थबोधी शब्दहरूको क्या दुरुपयोग !
बकिङघम प्यालेस आसपासको घुमघाममा कुरै कुरामा दुई जना सत्याग्रही प्रसंगमा आए । नेपालका गोविन्द केसी, बेलायतका ज्ञानराज राई । माग र दाबी छन् भूपू गोरखालाई समकक्षी गोरा सिपाहीसरह पेन्सन र अन्य सुविधाहरू । ठाउँ छ प्रधानमन्त्री कार्यालयछेउ दस नम्बरी डाउनिङ स्ट्रिटको एउटा कुनो । यताका डा. केसीको प्रेरणा र प्रभावले होला सायद उताका ज्ञानराज झ्याप्प सत्याग्रहमा डटेछन् । ल मार्‍यो बजियाले, ब्रिटिस सरकारलाई परेन कि फसाद † दाबीबमोजिम माग पूरा गरूँ, छलछाम र आलटाल गर्दै यतिका दिन झुलाउन सफल भइया छ, कसरी गरूँ ? नगरूँ, यी परे रगत, चीत्कार र आँसुले आफ्नो भूतपूर्व साम्राज्य फैलाइदिने र थामिदिने पीडित गोरखा सिपाहीहरूका हक्की र झोँक्की प्रतिनिधि । कदाचित निराहारी सत्याग्रहमै यी बूढाको प्राण पखेरु उडिहाल्यो भने !? जगत्सामु लोकतन्त्रको जननी भनिने बेलायतको घिरौँले नाकको गति के हुन्छ ? त्यो काटिँदैन र ठनक्कै ? सोझो नोकरका रूपमा यतिका दिन कजाइएको गोरखेले अब भने बिताउने भो ! ब्रिटिस सरकारका कन्चट टनकटनक टन्किए । निजको दम्भी चित्तमा तनावको चक्रबात् उठयो । र, जब्बर ज्ञानराज ब्रो सत्र दिन सत्याग्रहमा डटेपछि ब्रिटिस सरकार छेरभालु भयो । आखिरम दुई पक्षको कुराकानी भयो । र, समस्याको गाँठो फुकाउन एउटा त्रिपक्षीय समिति बनाउने सहमति गरियो । यसरी कागजमै भए पनि ज्ञानराजले जिते, र गोरखालीको सत्याग्रहसामु ब्रिटिस सरकार ग्वाँ भयो ।
ज्ञानराजको सम्झनाले अहिले मलाई ओलीराज सम्झायो । बचाल ज्ञानराज सार्वजनिक डबलीमा उत्तेजक भाकामा ‘अपराधी ब्रिटिस सरकार’ भन्दै आफ्ना मर्का र दाबीका कुरा थाल्छन् । उनलाई पक्रिन बेलायती पुलिस आउँदैन । न त उनले खाइपाइ आएको पेन्सन नै कट्टी हुन्छ । न त उनी बेलायतबाट नेपाल लखेटिन्छन् । यता हाम्रो ओलीराजमा ? समाजिक सञ्जालमा कसैले पोस्ट गरेको बेहोरा कसैलाई शेयर गर्ने अभागी नागरिक पक्राउ पर्छ । र, ओली सरकारले उसको जागिरै खाइदिन्छ । भन्नलाई उताको पनि संसदीय व्यवस्था, यताको पनि संसदीय व्यवस्था । अझ उन्नत संसदीय व्यवस्था † तर ब्रिटिस राजमा अलिकता सहिष्णुता छ, ओली राजमा चौतर्फी असहिष्णुता छ । लाग्छ, ओली राजको क्रूर असहिष्णुता हिन्दु उन्मादी मोदी राजबाट प्रेरित छ । र, यो कमरेड सिजिन पिङको एकल स्वेच्छाचारतर्फ लम्किन उपद्रो जिद्दी गरिरहेछ ।
त्यो दिनको दृश्यावलोकनको एक किस्ता तुरियो । र, हाम्रो टोली गुँडतिर बाटो लाग्यो । बाटामा थेम्स नदीको पुलमाथि खुला रेस्टुरामा खाजा खाइयो । सम्झँदैमा द्रव्यभारले कुम लच्किने महँगो न महँगो खाजा । नाथे एउटा हयाम्बर्गरलाई ५ पाउन्ड नखत † ठाउँले गर्दा लन्डनकै महँगो जिनिस रे त्यो । खाजामा साथ दिने नरेश किञ्चित् गम्भीर छन् । किरण र मनकुमार ब्रो छन् खास्सै विनोदप्रेमी । किरण ब्रो रहेछन् भूपू कान्तिपुर टेलिभिजनकर्मी । छँदाखाँदाको जागिर चटक्कै छाडेर पढ्ने सुरले लुत्त बेलायत छिरेका । के पढ्ने हो ? यी अलमस्त तन्नेरीलाई थाहा छैन । कसरी पढ्ने हो ? त्यो पनि यिनलाई पत्तो छैन । यी निरुद्देश्य यायाबरझैँ यता र उता लुखुर–लुखुर हिँड्छन् । मानौँ जीवनले आफ्नो बाटो आफैँ खोज्छ । आखिर चिन्ता गर्नु किन ? प्रिय भाइ किरणलाई लाग्दो हो, जीवन अनन्त छ । आखिर हतार किन ? रनै उनी समयको बिल्कुल पर्बाह गर्दैनन् । दस बजे भेट्ने भन्यो, ब्रो झुल्किन्छन् एघार बजे । यी यात्राका बडो स्वादबद्र्धक मसला हुन् । के हाँसझैँ सुस्त गतिमा हल्लिँदै हिँडेको ब्रो ? अरे, ज्यानको भारी बोक्नु परेन र दाजु ? कतिको भारी हो ब्रो ? चानचुन एक टन नि । हेर्दा त्यस्तो लाग्दैन त यार् । सोलोडोलो छ क्या दाजु माथि शिरदेखि तल पाउसम्म । किरण ब्रो मग्न मुद्रामा ख्यालठट्टा गर्छन् र हयाम्बर्गरको भारी द्रव्यले दाबिएका हाम्रा चित्तहरू आनन्दी हाँसोले हल्का हुन्छन् ।
आयो कुरा अब अर्का रौसे कमरेड मनकुमारको । मन ब्रो मलुवा एमाले रहेछन् । यी मनुवा कुरैकुरामा एमालेको झन्डा उठाउँछन् । तर, दृष्टान्त, तथ्य र तर्कले एमालेको वैचारिक र आचारगत गरिमालाई सिद्ध गर्न सक्दैनन् । र, यी वाचाल कमरेड थपक्क झन्डा बिसाउँछन् । अनि छिनभरमै पत्तै नपाई फेरि झन्डा उठाइहाल्छन् । म भन्छु— आफ्नो गरिखाने हो बन्धु, बित्थामा अर्काको झुत्रो झन्डा किन बोक्नु ? मेरो कुरो सजिलै पत्याउँछन् र फेरि संस्कारतुल्य झन्डा उठाइहाल्छन् । मन ब्रोलाई लन्डनका गल्लीगल्ली कण्ठ रहेछन् । सुनेको थिएँ— लन्डनको नाभिमा कतै कार्ल माक्र्सले कष्टसाध्य यत्नद्वारा दर्शन कोरलेको बास छ । मनले फुर्किँदै भने— बास मलाई थाहा छ । बस्, तिनले हामीलाई माक्र्सको बासतिर डोर्‍याए । बास सोहो भन्ने टोलमा रहेछ । साँघुरो सडक, घरहरू पुराना र सानासाना । यताउता सरसफाइ र स्वच्छताको दशा दयनीय छ । कतै शराबी ब्रो अचेत औतारमा पेटीमा लमतन्न छ । कतै माग्ने मनुवा हार्मुनियम बजाउँदै पदयात्रीका चित्त पगाल्ने धुनमा छ । कसैले भनेको सम्झन्छु— माक्र्स डेरा गरी बसेको टोल अचेल नगरवधूहरूको चहलपहलमा नामी छ, नेपालको ठमेलजस्तै । झट्ट हेर्दा माक्र्सका पदचिह्न अंकित सोहो टोल वृद्ध, उदास र उराठ मुद्रामा झोक्राइरहेझैँ लाग्छ । हामी सडकवारि पेटीबाट माक्र्सको पारिको डेरा हेर्छाैँ । दोस्रो तलामा माक्र्सको बास छ । बासबाहिर भित्तामा बूढाको जन्म र मरनको मिति अंकित छ । र, साना अक्षरमा अरू केही लेखेको देखिन्छ, जो ठमिन्न । त्यो घर, त्यो कोठा, त्यो साइनबोर्ड मलाई एक भौतिकवादीको पवित्र तीर्थझैँ लाग्छ । म अलिबेर विस्फारित नजरले अपलक हेर्छु, र श्रद्धानत भई अदृश्य बूढालाई भावमय अभिवादन गरेर बाटो लाग्छु ।
अहिले कार्ल माक्र्सको गुँडसँग जोडिएर हवार्ड जिन सम्झनामा टुप्लुक्किए । उनै प्रिय अमेरिकी जनइतिहासकार हवार्ड जीन । जीनले सन् १९९९ मा माक्र्सको यादमा एउटा नाटक लेखेका छन्— सोहोमा माक्र्सको पुनरागम । नाटकमा जीन बडो आक्रामक, जीवन्त र रुचिकर ढंगले माक्र्सलाई बकाउँछन् । र, माक्र्स आफ्नो विचारको बचाउ पक्षमा जोडदार तर्क गर्छन् । र, आफ्नो नित्य अभावग्रस्त र निरन्तर संघर्षमय जीवनको इतिवृत्त कहन्छन् । जसको एक अंश यस्तो छ, ‘युरोप महादेशभरिका शरणार्थी सोहोको हाम्रो डेरामा आइरहन्थे । पिपर तिनैमध्ये एक थियो । ऊ मेरोवरिपरि अरिंगालझैँ भुनभुनाइरहन्थ्यो । ऊ अरूलाई फुक्र्याउन उस्ताद चाटुकार थियो । ऊ मेरा लेखको उद्धरण मलाई नै सुनाउँथ्यो । म भन्थेँ— ए पिपर, मेरा उद्धरण मलाई नै नसुनाऊ न बाबु । अँ, मलाई खुसी पार्न ऊ दास क्यापिटल उल्था गर्छु भन्थ्यो । तर, अंग्रेजी भाषालाई ध्वस्त नपारी ऊ एक वाक्य पनि बोल्न जान्दैनथ्यो । अरे बा बा, अंग्रेजी त शेक्सपियरको भाषा पो हो । शेक्सपियरले उसले बोलेको एक वाक्य अंग्रेजी सुनेका भए सके विषपान गर्थे होलान् । त्यही पिपरले एक दिन मलाई माक्र्सवादी समाज गठन गरेको कुरा सुनायो । र, हात मल्दै मलाई त्यो समाजमा बोलिदिन बिन्ती बिसायो । मैले सोधेँ— हैन, के समाज हो त्यो ? उसले बोलीमा चिल्लो घस्दै हामी आफूलाई माक्र्सवादी भन्छौँ डा. माक्र्स भन्यो । हामी तपाईँका विचारका अटल अनुयायी हौँ । मैले भनेँ— मलाई माफ गर बाबु, म त्यहाँ बोल्दिनँ । किनभने मचाहिँ माक्र्सवादी होइन !’
हेर्नुस्त, माक्र्सको विनयशीलता, सुझबुझ र दूरदर्शिता ! प्रकाशित : आश्विन २०, २०७५ ०८:२१
कृष्णको अर्ती उपदेशजस्तै
काठमाडौँ — इतिहासविद् योगेशराजसगको कान्तिपुर कुराकानीले असोज १३ को कोसेली अंक भरिएको पाएँ । यति धेरै महत्त्व र अर्थ देखेर छापिएको कुराकानी के–के न होला भन्दै पढी सिध्याएँ । इतिहाससँग सम्बद्ध रहेका केही जिज्ञासा र जवाफ सान्दर्भिक लागे पनि लेखक योगेशराजले ‘यो पनि ठीक, त्यो पनि ठीक’ को शैलीमा दिएको जवाफ भने चित्त बुझ्ने लागेन ।
पृथ्वीनारायण शाहदेखि सुगौली सन्धिसम्मको कुरामा अथवा आज भएका अनेक राजनीतिक–सामाजिक परिवर्तन (जनयुद्ध वा नयाँ नेपालको सन्दर्भ) का कुराहरूमा जतै पनि ‘कुनै कुनै त खास राजनीतिक परियोजनाअन्तर्गत थालिएका गतिविधि’ भनेर सजिलो जवाफ दिन खोज्नु त्यति उचित लागेन । यसमा त बहस, समीक्षा र मीमांसा हुन सक्नुपर्छ । तर, योगेशराजजस्तो विचारक पनि सजिलो जवाफतिर लाग्नुभएको हो कि भन्ने लाग्यो ।
यस्तै एक ठाउँमा योगेशराजको जवाफ छ, ‘रणहार’ पढेर पाठकले रणजित मल्लकालीन नेपालखाल्डोको इतिहास बुझेँ भन्छन् भने त्यो उपन्यासले दिन खोजेको घमण्ड होइन । रणजित मल्ल किन हारे, के कसो गरेका भए उनी जित्थे, भन्नेजस्ता प्रश्नको तिनले जवाफ पाएँ भन्छन् भने त्यो उपन्यासले दिन खोजेको भ्रम होइन । एउटा उपन्यासले त्यस्तो भ्रमात्मक ऐतिहासिक शिक्षा दिन सक्दैन । उपन्यासको मुख्य काम पाठकलाई ऐतिहासिक अन्तर्दृष्टि दिने होइन । बितेको समयप्रति संवेदनशील बनाउने मात्र हो । उपन्यासले बुद्धिलाई परिष्कृत गर्ने होइन, मनलाई ताजा पार्ने हो, आलो बनाउने हो ।
यसरी ऐतिहासिक अर्थ र महत्त्वको उपन्यास लेखिएपछि के मनलाई ताजा पार्ने र आलो बनाउने प्रयोजनमा मात्रै एउटा पाठक कसैको लेखाइमा घोत्लिरहने हो र ? योद्धा भनेर कहलिएका रणजित मल्लको ‘हार’ को कारण समेटेर उपन्यास लेखिएपछि तथ्य–तथ्यांक मात्रै काफी हुन्छ र ? रणजित नामका ऐतिहासिक पात्रको ऐतिहासिकता, मनोविज्ञान, सामाजिक यथास्थितिले जित वा हार निर्दिष्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यो पक्ष पनि ‘रणहार’ मा समेटिएजस्तो लाग्दैन । तर, योगेशराजको सिंगो र एकदमै बृहत् अन्तर्वार्ता भने गीतामा भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई उपदेश दिएजस्तो मात्रै लाग्यो, एकतर्फी र सपाट ।
हाल : मन्थली, रामेछाप